Maamulka G/Bari oo ku dhawaaqay baneynta Dhulkii hore ee Dekeda Boosaaso+Sawiro – SBC
Maamulka G/Bari oo ku dhawaaqay baneynta Dhulkii hore ee Dekeda Boosaaso+Sawiro
Shirsaxaafadeedka ayaa waxaa siwada jira u qabtay maamulka Gobalka Bari kan Degmada Bosaso,laamaha amniga gobalka Bari,Wasaarada dekadaha iyo la dagaalanka Burcadbadeeda.
Shirsaxaafadeedkan oo lagu qabtay guriga gobalka ayaa waxaa ugu horayn kahadlay gudoomiyaha gobalka Bari C/samad Maxamed Galan”kasoo sheegay in ay ujeedada shirkaan ay tahay sidiiloobanayn laaha dhulkiihore Ee dekada magaalada Bosaso kaasoo sheegay in ay hada tahay deegaan ay hada dad rayida ah deganyihiin islamarkaasna ay dhulka dowladu leedahay aysanjirina cid amar usiisay cida degan hada in ay degaan.
Gudoomiyaha yaa sodookale sheegay in uu maamulku goor dhow cabiraayo ddulka ay banaynaayaan ee uu shegay in ay dowladu leedahay.
Dhankakale taliyaha qaybta gobalka Bari Cismaan xasan cowke ayaa sheegay in dhankooda amni ahaan ay talaaba kaqaadayaan cidii amardiida kusamaysah awaamiirta maamulka islamarkaasna sheegay in ay qaybweyn kaqaadanayaan banayta dhulka ay dowladu leedahay.
Wasiir ku xigeenka dekadaha iyo ladagaalanka burcad badeeda Abshirsir siciic saalax ayaa asna sheegay in dhulkaan horay loo qorshay in labanayyo balse hada loo helay wakhtigii ay maamulku arintaasi ku dhaqaaqilahaayeen wasiir kuxigeenka ayaa sidookale sheegay in dadka degan halka ay banayaan ay isaga guuraan islamarkaas ay qaataan amarka maamulka lana shaqayaan dowladooda.
Faysal C/laahi Maxamed( Farateeb)
fiican in la baneeyo fiican in labaneeyo sxb beenee wadada halguu dhiso qurxi magaaaladaada sxb let’s ganna support our region being puntland student in Minnesota university